စိမ်းလန်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်များလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂေဟာအသစ်လေးတခုကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက် တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူကုန်ကူးခံရတဲ့ကလေးတွေ အမျိုးသမီး တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ပေး မယ်။ မိဘနဲ့ ပြန်လည်မဆုံတွေ့နိုင်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြားပေးထားမယ်။ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပညာရပ်တွေကိုလည်း သင်ကြားပေးမယ်။ မိသားစုတွေနဲ့လည်း ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း တွေ မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးက ဆရာမတွေ ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်နေသူတွေ ပညာရေး ကျန်းမာရေး အလုပ်သမားရေး အမျိုးသမီးရေး လူ့အခွင့်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ပြသထားတဲ့ ပန်းချီလေးတွေ ကျောက်စီပန်းချီလေးတွေကတော့ ကလေးငယ်လေး တွေရဲ့ လက်ရာလေးတွေပါ။ ကျောင်းဝတ်စုံ မာဖလာ ပိုက်ဆံအိပ်လေးတွေကတော့ ဝေဒနာရှင် အမျိုး သမီးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ စိမ်းလန်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနိုင်ဖို့ မိမိနေထိုင်ရာ လူ့ပတ် ၀န်းကျင်ကြီးထဲမှာ သစ်လွင်လတ်ဆတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ကျမတို့ဂေဟာ နောက်တခု ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
(Green Hopes Centre)
Forming Green Hope Centre
SAW openedanew shelter named Green Hope centre which is for the trafficked women and children. The opening ceremony was held in Mae Sot. It aims to help develop mentally which was being traumatized by their past experiences. Children who could not be reunited with their parents will be sent to school or will get the vocational trainings depending on their ages. SAW will also arrange children who have parents to be able to reunite with their parents.
SAW's director, Mrs. Aye Aye Mar said " SAW is the social organization helping for the displaced women and children. In our program, we have centre for women and rehabilitation program for women as well as centres of children and rehabilitation program for them. SAW started on June 25th, 2000. At first, we have to support ourselves by opening the shop in the Dr. Cynthia Maung's clinic compound. Later, we expand our programs and now as you see, we areasuccess organization. This is because of all of your cooperation and encouragement to us. Please keep on supporting to us."
Then, she added "I very much thank to the representatives from the NGOs, CBOs, Mae Sot hospital, Health organization, labour, education and women activists who attended to this opening ceremony. The stone art paintings which show on the other side are the handiwork of SAW's children. The school uniform, scarves, and purses are the handiwork of the women living with HIV. To have the better hope and to live with the innovative idea, we extend openinganew centre."
Posted by SAW at 07:47
Poe hat phyu said...
အခုလို အမျိုးသမီးငယ်များကို စောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အတွက် တကယ်ကိုပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
သူတို့လေးတွေရဲ့ဘ၀ကို ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်၊ ပြန်လည် စိမ်းလန်းစိုပြေအောင် ကူညီမှုတွေ အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ပါစေလို့ ကူညီဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
14 January 2009 at 16:34